उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै - Medianp.com
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ०७, २०७३१२:३७0	अच्युत रेग्मी, काठमाडौँ, ७ चैत । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन दिनदिनै जटिल बन्दै गएको छ । उपत्यकाको दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, सवारी चाप, सीमित तथा साँघुरा सडक, सवारी नियम उल्लङ्घनजस्ता प्रवृत्तिले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्य जटिल एवम् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै सवारी साधनको सङ्ख्या पनि अत्यधिक रुपमा बढेर गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे हाल काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ११ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् – “वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन भित्रिन्छन् ।”
उनी भन्छन् – “सहरी विकासको अनुपातमा सडक विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुका साथै यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।” घिमिरे काठमाडौँमा सवारी साधनको चापअनुसार ट्राफिक खटाउने हो भने दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताउँछन् । अहिले एक हजार ८५ जनाको दरबन्दी महाशाखामा भए पनि देशभरबाट तालिममा आएका ट्राफिकलाई समेत काममा खटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आईजीपी मुद्दाको आज टुंगो लाग्दै, देउवाले गरे कानुन व्यवसायीसँग परामर्शचाँडै अाउँदैछ बुढाेपन राेक्ने चिया !
मुसहर बस्ती निर्माण गर्दा धुर्मुस सुन्तलीलाई कसले कति रकम सहयोग गरे ? (विवरणसहित)
भूकम्प गएकाे दुई वर्षमा ४० प्रतिशत निजी घरको पुनःनिर्माण